२ साता अघि विवाह गरेर श्रीमान्को घर गएकी इन्जिनियर छोरीको जब मृत्युको खबर आयो, पोष्टमार्टम रिपोर्टले खुलायो यस्तो रहस्य – live 60media
पोस्टमार्टम रिपोर्टमा अर्जुको निधनको कारण भने अर्कै आयो । उनको निधन श्वास फेर्न नसकेका कारण भएको खुलासा भयो । उनको घाँ टी थिचेर निधन भएको संकेत प्रहरीले पाएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । प्रहरीले उनको श्रीमानलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ
← अचम्मको रातो केरा, देख्दै अचम्म लाग्ने यो केरा कहाँ पाइन्छ ? छन् कैयौँ फाइदाहरु, कतिपर्छ मूल्य ?
दान गर्नाले यसरी चम्कन्छ भाग्य कृपया लिंक खोल्नुहोस् र तल टिप्पणी वर्गमा तपाईंको राय दिनुहोस्! →